प्रकाशित 08 / 29 / 2018 by Dr. Patrick Young मा लेखियो सेक्स ड्रग पाउडर. यो संग 59 टिप्पणिहरु.
59 प्रतिक्रिया टिप्पणिहरु
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक09 / 29 / 2018 मा 6: 06 ए.सी.
PDE5 अवरोधकर्ताको रूपमा, रक्त संचारलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ, मुटु छिटो छिटो पार्नु भनेको साइड इफेक्टको अभिव्यक्ति हो
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक09 / 29 / 2018 मा 5: 17 ए.सी.
बाँकी लेखमा, प्रत्येक यौन दुर्व्यवहारको प्रयोगको विवरण साझा गर्नेछ। tadalafil लागू औषधि अन्तरक्रिया, flibanserin ड्रग अन्तरक्रिया ... आदि।
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक09 / 29 / 2018 मा 5: 09 ए.सी.
बाँकी लेखमा, प्रत्येक यौन ड्रग्सको थप विस्तार जानकारी साझा गर्नेछ। खुट्टा, साइड इफेक्ट, उपयोग ... आदि समावेश गर्नुहोस्।
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक09 / 29 / 2018 मा 4: 40 ए.सी.
यौन दुर्व्यवहारको बाकी साझामा, थप जानकारी पाउनेछ। केवल टाडालेफिल साइड इफेक्ट वा फ्लिब्सरिन साइड इफेक्ट, र खुसी जानकारी ... आदि।
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक09 / 29 / 2018 मा 4: 29 ए.सी.
मतलब पाउडर रूप मा वियाग्रा, वियाग्रा को सक्रिय पदार्थ sildenafil सीट्रेट पाउडर हो
Cheska Summers09 / 25 / 2018 मा 9: 24 ए.सी.
मैले मेरो पतिलाई सोधें भने यदि हामी यिनी यौन दुर्व्यवहार थोपा थोपा हुन सक्दछौं। एकै ठाउँमा, मैले देखेको छु कि हामी त्यतिबेला हाम्रो प्रदर्शनमा फरक फरक थियो। Placebo शायद, वा यसको वास्तव मा एक प्रभाव। तर अझै पनि, यो हाम्रा दैनिक यौन संलग्नताहरूको भाग होइन। जब हामी केहि फरक चाहन्छौं।
रयान ड्यानियल09 / 25 / 2018 मा 9: 21 ए.सी.
व्यक्तिगत रूपमा, मैले अझै पनि कुनै पनि लागू औषधी प्रयास गरेन, तर म यो लेख भविष्यको उद्देश्यको लागि राखिरहेको छु। यदि यसले यौन अनुभव बढाउन सक्छ, त्यसो भए मैले यसलाई प्रयोग नगरेको कुनै कारण देख्न सकिनँ। अझै पनि, मलाई लाग्छ कि यी औषधिहरू मध्यस्थतामा प्रयोग गरिनु पर्दछ ताकि त्यसमा निर्भर हुँदैन।
Albeneth09 / 23 / 2018 मा 10: 49 बजे
के यी यौन औषधिहरू सुरक्षित छन्? मलाई आशा छ कि उनी निर्भरताको कारण हुन सक्दैनन्। सबै भन्दा माथि, एक चिकित्सकसँग परामर्श गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
Doug Brians09 / 23 / 2018 मा 5: 33 बजे
यो राम्रो छ यी ड्रगहरू पुरुष र महिलाहरूको लागि उपलब्ध छन्। उनीहरु स्वस्थ पूरक जस्तो आवाज गर्छन् कि डाक्टरहरूले व्याख्या गर्न र सुत्न सक्छन्।
हंक नोलान09 / 23 / 2018 मा 5: 31 बजे
यो राम्रो छ यी औषधिहरू अस्तित्वमा छन् ताकि मानिसहरूले स्वस्थ यौन जीवन पाउन सक्छन्। यो राम्रो छ सबै परिणामहरू र सावधानीहरू सूचीबद्ध छन्।
Lionel09 / 23 / 2018 मा 1: 47 बजे
डैक्सक्सेटिनले अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ जुन मानिसहरुसँग हुन सक्छ त्यसैले यो यस प्रकारको सेक्स सम्बन्धी समस्याको सामना गर्न साझेदार हुनेछ।
एम्मा09 / 23 / 2018 मा 1: 42 बजे
यस प्रकारको महान सेक्सको लागी ड्रगहरू आफ्नै आफ्नै काम गर्दैनन्, प्रयोगकर्ताद्वारा प्रयास हुनु पर्छ र यो स्पष्ट रूपमा यहाँ प्रयोगकर्ता को उत्तेजना चाहिन्छ भनेर बताइएको छ।
utibe09 / 23 / 2018 मा 12: 32 ए.सी.
मलाई थाहा छ कि यो यौन वृद्धिको प्रयोगका लागि राम्रो औषधीय पाउडर हो, तर यो पनि पाठकहरूलाई केही सावधानीका लागि केही साइड इफेक्ट पनि बताउन राम्रो हुनेछ।
डायना09 / 23 / 2018 मा 12: 24 ए.सी.
धेरै विवादास्पद मुद्दा पुरुषहरु लाई शुक्राणु र समय-समय मा निकास को पानी ले रहछन। यो राम्रो छ कि हामी यो समस्यालाई संकुचित गर्न ड्रग्सलाई बढावा गर्दै छौँ।
Pietro टी09 / 22 / 2018 मा 9: 23 बजे
त्यसो भए कि तपाई सेक्स प्रविधि औषधि, क्यामेरा, अब पाउडर फारममा हुनुहुन्छ? जय! तपाइँ अब तपाईंको चियाको लागि क्यामेरा पाउनुहुन्छ। तर, पकड छ, यसले तपाईंको कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्नेछैन, केवल सफ्ट हाहाहाहामा जाँदा तपाईंको बिस्कुट रोक्छ।
सेक्सी Mack09 / 22 / 2018 मा 9: 19 बजे
के यो सत्य हो? यसैले यो मलाई सेक्स को 15 राउन्ड पाउनेछ? त्यो धेरै यौन व्यवहारलाई औषधिले भरिएको हुनुपर्छ। हाहहह
रोना बुर्लिल09 / 22 / 2018 मा 9: 05 बजे
म साँच्चिकै पक्का छैन कि म यहाँ छु किन। तर, मलाई स्थायी समस्याहरूको बारेमा केहि थाहा छ। मेरो भनाइको मतलब धेरै बर्ष पछि विवाह भएको पछि मेरो श्रीमान्ले अब ड्राइभलाई बढावा दिन पूरकहरू लिदै हुनुहुन्छ। यदि यो अझै पनि पुरानो दिनहरू थियो भने उहाँ अनिच्छुक हुनुहुन्थ्यो तर अब उहाँ यससँग राम्रो हुनुहुन्छ।
विजेता09 / 22 / 2018 मा 8: 32 बजे
मैले यौन औषधिको लागि त्यो खुल्ला मेक्सिकोमा कम्तिमा कहिलेकाहीं त्यो खुल्ला छैन। प्राकृतिक सामान जस्तै ginseng चाल चल्छ !!! मैले यो प्रयोग गर्ने एकमात्र तरिका हो जब म पुरानो हुन्छु। हो म वास्तवमा यो विचार गर्दैछु।
मलिक विनेता09 / 22 / 2018 मा 7: 53 बजे
त्रिपुल्लिलको पीडीएक्सएनमक्सएक्स प्रभावहरु र महिलाहरु लाई विवादास्पद अनुभवबाट फाइभान्सेरिन दुवै को लागी एक उपयोगी पूरक खोजी गर्न लिङ्गको लागि पर्याप्त कारण हो। मलाई यकीन छ कि अमेरिका र विदेशमा सूचीबद्ध कुनै औषधिको लागि धेरै चासो पक्षहरू हुनेछ।
Howy Ridell09 / 22 / 2018 मा 7: 48 बजे
नतिजा र नैदानिक ​​अध्ययनहरूले धेरै प्रतिज्ञा गरेका छन्। एक स्वस्थ यौन जीवन धेरैको लागि महत्त्वपूर्ण छ र म खुसी छु कि यी ड्रगहरू राम्ररी प्राप्त भइरहेको छ।
शैना बेल्ट्राम09 / 22 / 2018 मा 1: 03 बजे
यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईं केहि हुनुभन्दा पहिले केहि थोरै थोरै सामान संग थोरै सामान वा बाथरूम स्ट्याम्पमा जानुभएको कुरामा केहि जानकारी छ। तपाईलाई सहयोग पुर्याउनुको लागी हामी औषधि उत्साही फोरम मार्फत जान्थ्यौं, कुन सीमित अध्ययनहरू अवस्थित छ, र धेरै व्यक्तिहरु - आक्रोशित टर्करहरु लाई मनोरञ्जन गर्न मनोचिकित्सकबाट, सल्लाहकार उत्साहीबाट डाक्टरहरु र मनोचिकित्सकहरुको साथमा सल्लाह दिएका छन्। ड्रग्स मा उच्च हम्पिंग को बारे मा त्यहाँ सबै जानकारी।
Janine Marie Alexandra Bocateja09 / 22 / 2018 मा 1: 00 बजे
केही यौन दुर्व्यवहार ईल्पनिकता पूरा गर्नको लागी तपाईं खोल्न सक्नुहुन्छ, जबकि अन्य बोनस हत्याराहरू पूर्ण छन्। तपाइँ औषधिको नाम राख्नुहुन्छ, र कसैलाई उनीहरूले यौन सम्बन्ध राख्ने प्रेम गर्छन्।
nolly09 / 22 / 2018 मा 5: 45 ए.सी.
यो राम्रो छ कि लिंग बढ्दो औषध दुबै पुरुष वा महिलाको लागि हो। यो सेक्सको दुवै दुबैको कुनै पनि यौनसँग यौनसम्पर्क हुनेछ यो यी औषधीहरू संग कुनै पनि विकसित हुनेछ।
डैनी09 / 22 / 2018 मा 5: 19 ए.सी.
यसले यौन समस्याहरूको कारणले गर्दा केही सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। प्रेमीहरूले यो पुनरुत्थानको लागि यसबाट लाभ उठाउनुपर्छ।
विक्रम पर्मर09 / 21 / 2018 मा 10: 20 बजे
यौन ड्रग्समा भर पर्न सक्छ घातक हुन सक्छ। यसले यौन प्रदर्शनमा एक कम भरोसा बनाउन सक्छ।
Mog Arten09 / 21 / 2018 मा 7: 03 बजे
यो रोचक छ कि यी ड्रगहरू यौन प्रदर्शन र आनन्द बढाउँछन्। बाडेको मा धन्यवाद।
माइल दुबर्जर09 / 21 / 2018 मा 4: 41 बजे
दिलचस्प निष्कर्षहरू। मलाई त्रसित हुन्थ्यो भने निर्धारित भन्दा भन्दा तल्लोलफिल वा फ्लिबिन्सेन को अधिक ले कुनै साइड इफेक्ट हो। बाडेको मा धन्यवाद!
लिसा नतालियन09 / 21 / 2018 मा 9: 28 ए.सी.
म यो लेख खोज्न धेरै हर्षित छु, र मेरो पतिले यो पनि पढ्न सोध्नु हुनेछ। सबैलाई सेक्स चाहिन्छ, यसका लागि शर्मिला महसुस गर्न आवश्यक छैन। यस लेखमा सेक्स ड्रग पाउडरको बारेमा जानकारी साझेदारी गर्नुभएकोमा धन्यवाद, यो धेरै उपयोगी छ!
रिचर्ड ह्यान्स09 / 21 / 2018 मा 7: 59 ए.सी.
मलाई र मेरो साझेदार हाम्रो रोचक जीवन लाई अझ रोचक बनाउन तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ। यी ड्रगहरू ध्वनि जस्तै कि उनीहरूको प्रयास गर्न योग्य छन्। धन्यवाद!
विन्सेंट मैथ्स09 / 21 / 2018 मा 7: 56 ए.सी.
अब मलाई थाहा छ कि कुन औषधिहरू प्रयोग गर्न को लागी अन्तरगत क्षणमा यौन प्रदर्शन सुधार गर्न को लागी! धन्यवाद, तपाईंका लेखहरू मनपर्छ।
टम Esthber09 / 21 / 2018 मा 6: 39 ए.सी.
मलाई मेरो उत्तेजनाको समस्या कहिल्यै भएन तर मलाई बारम्बार हार्न बनाउने बाहेक। मलाई लाग्छ मलाई यी PDE5 सप्लीमेन्टको आवश्यक हुन सक्छ केही वर्षभित्र haha।
बेनेडिक्टा09 / 21 / 2018 मा 1: 32 ए.सी.
म Udenafil सिफारिस गर्नेछु यस तरिकाले केवल सोसायटी जस्तै मान्छे मान्छे प्रयोग गर्न को लागी। यस बारे राम्रो कुरा यो एक सीमित साइड प्रभाव हो .तो यो अत्यधिक अत्यधिक प्रयोग को लागि सिफारिस गरिएको छ
babi09 / 21 / 2018 मा 1: 26 ए.सी.
साझेदारहरूको लागि खुशीको समयमा खुशी छ साझेदारहरूको लागि र उनीहरूको यौन जीवन बनाउन सक्छ वा मर्न सक्छ। म आशा गर्दछु कि ती खुशीहरूले यी औषधीहरू आफ्नै आफ्नै लागि प्रयोग गर्न सक्दैनन्।
मार्क09 / 20 / 2018 मा 11: 34 बजे
मलाई मन पर्यो कि तपाईंले कहाँ संकेत गर्नुभयो कि यौन समस्या यो सेक्स ड्रगसँग समाधान छैन, त्यसपछि डाक्टरलाई सल्लाह दिइन्छ। म यो अवस्थामा गर्ने सबै भन्दा राम्रो कुरा हुनेछ भनेर सोच्नुहोस्।
नुनु09 / 20 / 2018 मा 11: 27 बजे
कुनै पनि युगलको यौन जीवन कुनै सम्बन्धको प्रत्यक्ष तारको रूपमा हो जसको रूपमा यो समय समयमा समय बढाइन्छ। यस सम्बन्धको राम्रो लागि यी कुनै पनि वृद्धिकर्ताको प्रयोग गर्न राम्रो हुनेछ।
Fredrick Isinguard09 / 20 / 2018 मा 11: 21 बजे
आजकल यी यौन दुर्व्यवहार वास्तवमा स्वस्थ जवान मान्छेले समस्याको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ। तथापि, तिनीहरूले पुरानो मान्छे र ईडी पीडाहरूलाई आफ्नो जीवनको बहुमूल्य पक्ष पुनः प्राप्त गर्न सक्षम पारेका छन्।
कप्तान यू09 / 20 / 2018 मा 10: 44 बजे
सायद यो अब यी कुराहरूको बारेमा खुला, यौन ड्रग्स, यौन प्रदर्शनमा कुरा गर्न समय हो। मेरा मतलब यौन समस्या अत्यावश्यक छ किनकि यो समस्या हुन सक्छ। त्यसो भए, म खुसी छु कि यी लेखहरू अवस्थित छन्। कम से कम मान्छे धीरे-धीरे यो स्वीकार गर्दै छन्।
मच09 / 20 / 2018 मा 9: 46 बजे
गहिराई चश्मा कहाँ छन्? मेरो गम्भीर अर्थ छ? घटक र सामान कहाँ छन्? म केहि चीजको लागि जुन तपाईंले इन्जेस्ट गर्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ के कुरामा के हुन्छ।
ब्राडली लैवेंडर09 / 20 / 2018 मा 4: 17 बजे
यौन प्रयोगको लागि एक राम्रो परीक्षण र सुरक्षित ड्रग जस्तो लाग्छ। तडलफिलि वा फ्लोबिन्सरिन प्रयोग गर्दा कुन औषधि वा पूरक लाग्न नसक्ने म उत्सुक हुनेछु। बाडेको मा धन्यवाद।
कर्ट रन्चर09 / 20 / 2018 मा 4: 14 बजे
उन्नत लाइब्रेरीको लागि Horray! एक बेहतर यौन प्रदर्शन को लागि शक्तिशाली सामाग्री जस्तै Dyclonin र flibanserin ध्वनि। बाडेको मा धन्यवाद।
AJ09 / 20 / 2018 मा 1: 21 बजे
ज्ञान शक्ति हो, जो पनि लाग्न सक्छ। कम से कम मलाई सेक्स अनुभव को अधिक मनोरंजक बनाउन को लागी कुनै उत्तेजना को आवश्यकता हुनु पर्छ, अब मलाई थाहा छ कि के लागी।
डेभीड टेजो09 / 20 / 2018 मा 9: 17 ए.सी.
यो पढ्नको लागि सबैभन्दा रोचक लेख हो ... :)। मैले एक पटक यो जिज्ञासा बाहिर प्रयोग गर्न खोज्यो। र सचमुच, म यो साँच्चै मजा लिइरहेछु ... मैले मेरो हृदय छिटो तेर्साइरहेको छ र मेरो टाउकोमा असुविधाजनक महसुस गर्दछु।
होल्डो एडम्स09 / 20 / 2018 मा 5: 40 ए.सी.
Avanafil साँच्चै मलाई मद्दत गर्यो। मैले मेरो यौन समस्याको सामना गर्दा लगभग असम्भव भयो, र धन्यवादको लागी म अानाफिल लाई निर्धारित गरिएको थियो।
जोएल वार्नर09 / 20 / 2018 मा 5: 38 ए.सी.
मैले समस्याको बेलामा sildenafil citrate प्रयोग गरे। यो केही समय लागेन, तर यो वास्तवमा प्रभावकारी थियो।
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक09 / 20 / 2018 मा 4: 17 ए.सी.
नमस्ते मित्र, वियाग्रा को मुख्य घटक Sildenafil सीट्रेट, सीएएस 171599-83-0 छ, तपाईं तल तलको पाटालफिल CAS 171596-29-5 को जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
मोजड09 / 20 / 2018 मा 4: 08 ए.सी.
म पक्का समयको पक्का छु कि पुरुषहरू वर्डेराफिल बाहिर औषधिको रूपमा मन पराउन मन लाग्दैनन् जसले औषधि खपत बढाउन सक्छ र सेक्सको अवधिमा मद्दत पुर्याउन सक्छ।
बोली09 / 20 / 2018 मा 4: 01 ए.सी.
मलाई आशा छ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनका साथ पुरुषहरूले सिल्डेनाफिल साइटरेट पढ्न पाउँदछन् ताकि उनीहरूलाई तिनीहरूको निर्माण कार्य फिर्ता पाउन मद्दत गर्न खरीद गर्न सकिन्छ। यो राम्रो यौन जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
जोए09 / 19 / 2018 मा 10: 09 बजे
मलाई थाहा छैन किन म यो पढ्दै छु। हाह। तर यस विषयमा महान जानकारी। कुनै पनि सेक्स ड्रग्स लिनु अघि केवल विशेषज्ञलाई सोध्नुहोस्।
कर्ट09 / 19 / 2018 मा 9: 14 बजे
म यी सेक्स दबाइहरु मध्ये एक भन्दा पहिले आफ्नो चिकित्सकलाई परामर्श गर्न सल्लाह दिन्छु। मेरो मतलब म सामान्यतया घटनाहरू पढ्छु जहाँ कसैलाई यो मृत्यु भएको छ। शाब्दिक रूपमा बंगालीको साथ जाँदै।
Jiffy Rando09 / 19 / 2018 मा 8: 59 बजे
सौभाग्य देखि मलाई यो आवश्यक छैन। YET र आशा छ कहिल्यै हुनेछैन। वैसे पनि, म आश्चर्य छ कि वियाagra यहाँ छैन।
बेब09 / 19 / 2018 मा 7: 05 बजे
8 प्रभावशाली सेक्स ड्रग पाउडर, यो एक छनौट को अर्थ दिन्छ र छनौट संग सख्त काम गर्दछ। एक यौन भूख फिर्ता फिर्ता गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यो पाउडर निश्चित रूपले मद्दत गर्नेछ।
टेड्डी09 / 19 / 2018 मा 6: 57 बजे
यो वास्तवमा एक ठुलो पोष्ट हो, जोडीहरूले यो पोस्ट अचम्म पाउनेछन् कि उनीहरूको यौन जीवनलाई बढावा दिन। म व्यक्तिगत रूपमा यो जानकारी चाहिन्छ र मेरो प्रणालीको लागि राम्रो हुनेछ कि कसैलाई प्रयोग गरिरहन्छु। यो जानकारी टाइममा छ, पर्चे बिना cialis किन्न सक्छ।
Landen Burrows09 / 19 / 2018 मा 5: 10 बजे
म यौन क्रियाकलाप मित्रहरूलाई सिफारिस गर्न निश्चित हुनेछु र जो यौन इच्छा बढाउन चाहानुहुन्छ! बाडेको मा धन्यवाद।
Moz Chesk09 / 19 / 2018 मा 4: 25 बजे
यी तपाईंको यौन जीवन को बढावा दिन को लागि उपयोगी उपचार जस्तै लाग््छ, र तपाईंलाई के गर्न को लागी औषधि जान्छ। बाडेको मा धन्यवाद!
मोच Sugih09 / 19 / 2018 मा 12: 35 बजे
मलाई लाग्छ कि यो यौन यौन दुर्व्यवहार निर्भरता हुन सक्छ, र हामी उनीहरूको प्रयोग नगर्दा हामीलाई कम भरोसा महसुस गर्न सक्छौं तर हुनसक्छ यो राम्रो हुन सक्छ यदि तपाइँ यो प्रायः प्रयोग गर्नुहुन्न भने, अधिक छ।
लियोनार्ड वेस्ले09 / 19 / 2018 मा 7: 25 ए.सी.
म साँच्चै लागूपदार्थको बारेमा कुनै विचार छैन, र धेरै यौन दुर्व्यवहार। र तिनीहरूले साँच्चै यौन संभोग संग मद्दत गर्छन् ??
अल्फासो फ्रान्कलिन09 / 19 / 2018 मा 7: 21 ए.सी.
वाह, मलाई थाहा छैन त्यहाँ पुरुष र महिलाहरुको लागि विभिन्न सेक्स ड्रगहरू छन्। कस्तो रोचक पढ्न
स्विस09 / 19 / 2018 मा 2: 35 ए.सी.
मलाई आशा छ कि ती साँच्चै यो जानकारी चाहिन्छ यो लेख पढ्न। म यो यौन उत्तेजनाहरू धेरै मदतकारी हुनेछ किनभने यो जोडीहरु को बीच राम्रो सम्बन्ध को बढावा दिन मा मदद मिलेगी।
Feddy09 / 19 / 2018 मा 2: 27 ए.सी.
यो एक अत्यन्त मूल्यवान पोस्ट छ .सेक्स समस्याले वास्तवमा केहि परिवारहरुलाई अलग पारेको छ र यो उल्लेखनीय छ कि केहि जस्तै राम्रो सेक्स ड्रगहरू क्रमबद्ध हुनुपर्छ र उपायको लागि लिइन्छ। यी दुर्व्यवहारहरू लिबिया बढाउन मदत गर्न सक्छन्।